२०७६/०७७ वजेट प्रस्तुत १३ खर्ब १५अर्बमा कता छ शिक्षा र स्वास्थ । » नेपालय टाइम्स
Home / शिक्षा / २०७६/०७७ वजेट प्रस्तुत १३ खर्ब १५अर्बमा कता छ शिक्षा र स्वास्थ ।
May 30, 2019	Leaveacomment 96 Views
आ. व. २०७६/०७७ को वजेट भाषण अर्थमन्त्रि युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत पेश गर्नुभएको छ । कुल १३ खर्ब १५ अर्ब छुट्टाइएको वजेटमा उत्पादन, आयोजना हस्तान्तरण र प्रादेशिक संरचना बनाउन जोड दिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्र विकास शिक्षा तर्फ माध्यामिक तह सम्म निशुल्क गरेको छ । ठुला विश्वविद्यालय अवधारण साथै साक्षरता अभियानमा जिल्ला संगै मदरसा ,गुरुकुल ,गुम्वा ,लाई स्तरउन्नति गरिने साथै आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा आवद्ध गर्न योजना वनाउने । राष्ट्रपति शिक्षा प्रणालि जसले १ विद्यालय एक खेलकुद कोश स्थापना को लागि ५ अर्व विनियोजन गरेको छ । यस योजना वाट ३०० विद्यालय निमार्ण र व्यवस्थापन कोष वनाई त्यसको लागि ८ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ ।
विश्वविद्यालय निमार्णमा योगमाया विश्वविद्यालय ,मदन भण्डारि विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय को स्तउन्नति गरिने ।
विज्ञान प्रविधि मदन भण्डारि विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान परियोजना १ अर्व १० करोड परमाणविक अनुसन्धान केन्द् को लागि १ खर्व ३ अर्व ६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
स्वाथ्य सेवालाइ जनमुखि वनाउन आधारभुत स्वास्थ सेवा निशुल्क गरिएको छ । स्वास्थ सेवा शिक्षा रआधारभुत उपचार को लागि ६अर्व विनियोजन गरिएको छ । क्यान्सर ,स्तन क्यान्सर लगायतको गम्भिर रोग को लागि योजना वनाउने । विपन्न लक्षित स्वास्थ सेवाको लागि ८ प्रकारको रेग निवारण को लागि २ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ ।
Previous लोक सेवा आयोगले खुलायो विज्ञापन
Next जेठ २३ गते सार्वजनिक बिदा